6 Tips for Career Progress or LandingaJob ...
Have you been looking for the right career steps over the last6months?Feeling stuck in ...
Career Advice Personal Upgrade Productive
Khant Zaw HeinDigital Marketing ExecutiveEnglishစာ သင်တန်းတွေတက်ပါလျက်နဲ့ သိပ်မထိရောက်ဘူးလို့ ခံစားနေရတဲ့ သူတွေအတွက် English Learning Tips လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။(၁) ရေးတတ်၊ပြောတတ်ဖို့ Readingနဲ့ Listeningကောင်းကောင်းလုပ်ထား ဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ့်မိခင်ဘာသာစကား မဟုတ်တဲ့ ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုကို လေ့လာပြီဆို Native speaker တွေရဲ့ အရေးအသား၊ အပြောအဆိုပုံစံတွေကို သေချာမသိ၊ မတတ်သရွေ သင့်Englishကတိုးတက်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် Speaking ကောင်းအောင်ဆိုပြီး Speaking အတန်းတွေပဲတက်၊ Writing ကောင်းအောင်ဆိုပြီး ...
Bill&nbsp;Gates's Summer Reading Lists (2)
သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Microsoft company ကို တည်ထောင်ထားတဲ့ Bill Gate က သူဖြစ်တဲ့ စာအုပ်တွေကို recommand ပေးလေ့ရှိပါတယ်။အခုနှစ်အတွက် လည်း သူ့ရဲ့ summer reading book တွေကို ညွှန်းထားတဲ့အတွက် ဖတ်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် ပြန်လည် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ၇။ Joshua Foer ရဲ့ Moonwalking with Einstein: The Art and ...
သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Microsoft company ကို တည်ထောင်ထားတဲ့ Bill Gate က သူဖြစ်တဲ့ စာအုပ်တွေကို recommand ပေးလေ့ရှိပါတယ်။အခုနှစ်အတွက် လည်း သူ့ရဲ့ summer reading book တွေကို ညွှန်းထားတဲ့အတွက် ဖတ်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် ပြန်လည် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ၁။ Dr.Edith Eva Eger ရဲ့ The Choice:Embrace the ...
Things To Do For Online Communication
Nanda Win MyintDigital Marketing ExecutiveOnline တွင် စာပို့ပြောဆိုရာတွင် ပြုမူသင့်သောအရာများ&nbsp;အခုနောက်ပိုင်းမှာ Online ကို အသုံးပြုတာ အရမ်းကို များပြားလာပါတယ်။ ပြီးတော့ Freelance(အလွတ်တန်း) လုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေလည်းများပြားလာပြီး သူတို့တွေက online ကနေ ဆက်သွယ်ပြီး အိမ်ကနေပြီး အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ပေးကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလိုမျိုး online ကနေ တဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရတာက လူချင်းတွေ့ပြီး ပြောဆိုရတာနဲ့ အရမ်းကို ကွာခြားပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် online ကနေ စာပို့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာ နားလည်မှုလွဲတာမျိုးမဖြစ်အောင် ပြောဆိုသင့်ပါတယ်။မနေ့သစ်က သူငယ်ချင်းတို့ကို Online ကနေ စာပို့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုမျိုး ပြုမူပြောဆိုသင့်လဲဆိုတာကို ပြောပြပေးမယ်နော်။(၁) လေးစားမှုရှိပါလူတိုင်းမှာ ခံစားချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ အထင်အမြင်အမျိုးမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ကိုယ်က online ကို အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒါကိုလည်း သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်က တခြားသူကို မမြင်ရပဲနဲ့ စာပို့ပြောဆိုလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သိထားရမှာတစ်ခုက အဲ့ဒီ account ကို အသုံးပြုနေတဲ့သူက ခံစားချက်ရှိတဲ့ တကယ့်လူဆိုတာကိုပဲ။ ကိုယ်က အဲ့ဒီလူကို မျက်နှာချင်းဆိုင် မပြောချင်ဘူးဆိုရင် စာပို့ပြောဆိုတာမျိုးလည်း မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကို ဒီလိုစကားမျိုးပြောဆိုတာ မကြိုက်ဘူးဆိုရင် တခြားသူတွေလည်း ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သိထားသင့်ပါတယ်။(၂) ကိုယ်ပို့တဲ့စာကို ဘယ်လိုတွေးမိနိုင်လဲဆိုတာကို သိထားပါပြင်းထန်တဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းတွေ အင်္ဂလိပ်စာ စာလုံးအကြီးတွေနဲ့ ရေးတာတွေနဲ့ exclamation marks တွေက စာမှာ အဓိပ္ပာယ်ကောက်လွဲတတ်ပါတယ်။ အချင်းချင်းတွေ့ပြီးစကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာ ပိုပြီးနားလည်အောင် လက်ဟန်အမူအယာတွေ မျက်နှာအမူအယာတွေနဲ့ အသံတွေက ကူညီပေးပါတယ်။ အကယ်၍ သိပ်နားမလည်ဘူးထင်ရရင်လည်း ကိုယ်က ပြန်ပြောလို့ရတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ...
Inspirational Movies To Watch During Thingyan
ဇာတ်လမ်းကတော့ ဉာဏ်ရည်မပြည့်တဲ့ Forrest Gump တစ်ယောက် သူ့ဘဝကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြတ်သန်းရာကနေ သူ့ရဲ့စိတ်ထားကောင်းမှု နဲ့ အလုပ်ကို တစ်စိုက်မတ်မတ်လုပ်ကိုင်မှုတို့ကြောင့် အောင်မြင်လာပုံကို ပုံဖော်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူငယ်ငယ်ထဲက ချစ်ရတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းကောင်မလေးနဲ့ Forrest ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုလဲ တွေ့မြင်ခံစားရမှာပါ။ တွေးစရာ၊ လေ့လာစရာတွေအများကြီးပါတဲ့ ကားလေးပါ။ဒီဇာတ်ကားကတော့ ရုန်းကန်နေရတဲ့ အရောင်းသမားဘဝကနေ၊ Stock Brokerage Firm တည်ထောင်သူအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့ Chris Gardner ရဲ့ ဘဝမှန်ကို ဖော်ကြူးထားတဲ့ကားပါ။ နေစရာ၊ စားစရာမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ Chris ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်မှုု၊ လုံ့လစိုက်ထုတ်မှုကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ဒီကားကတော့ Facebook တည်ထောင်သူ Mark Zuckerberg ရဲ့ Harvard ကျောင်းသားဘဝနဲ့ Facebook ဖြစ်လာပုံကို ဇာတ်အိမ်တည်ထားပါတယ်။ Mark ရဲ့ ကြိုးစားမှုတွေ၊ အခက်အခဲတွေကို ဖြတ်ကျော်ပုံတွေကို ခံစားရမှာပါ။ဒီကားမှာတော့ Joyဆိုတဲ့ ...
Khai Deih NeamDigital Marketing ExecutiveThingyan အတွင်း လေ့လာနိုင်မယ့် Online Learning Course မ်ား1. Google Skillshopတကယ်လို့ သင်က Marketing နယ်ပယ်က သူတစ်ယောက်ဆိုရင် google skillshop မှာ Google နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ tool တွေကို ကျွမ်းကျင်အောင် လုပ်နိုင်ပြီး certificated ပါ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။...